ဆှဗီဒီယိုစကားပြောခန်းစုံတွဲများအဘို့ - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး
ဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဒီလင့်များရှင်းလင်းရန်၏သမိုင်းမရဘူး။ ဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဒီလင့်များရှင်းလင်းရန်၏သမိုင်းမရဘူး။ ဟဲလ်သွင်လိင်ဘင်္ဂါချအိပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေချိန်းတွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းထိုင်းကမ်းခြေဝမ်ဂျပန်အမေနှင့်သမီး ၎ဖီးမွမ်ဘိုင်းရမှခေါ်ထုတ်လွတ်လပ်သောခေါ်ရန်မိန်းကလေးအတွက်မွမ်ဘိုင်းအိန္ဒိယမိန်းကလေးတစ်စင်ကြယ်သောနှင့်အတူလိုင်းမွမ်ဘိုင်းလစ်စလစ်ခေါ်ရန်မိန်းကလေးများအိမ်မယားသံုးေအိန္ဒိယမိန်းကလေးတစ်ဦးလိင်အလုပ်ဂျော့ဘ်ခေါ်ရန်မိန်းကလေးများဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်ဂျော့ဘ်ရှင်များအတွက်ရရှိနိုင်အပြည့်အဝညဥ့်အချိန်တိုလိင်ချိန်းတွေ့သတ်မှတ်ချက်များ-ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ-ရာဖယ်ရှားရေး-တင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို-ကိရိယာကိုဒေါင်းလုဒ်မီးေဗီဒီယို-ကြော်ငြာ
ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံးကမ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကမ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကမ်းလှမ်းလူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့အတူတကယ့်ပြောဆိုမယ့်အစားအစဉ်အလာအစာ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အကောင်းနှင့်အမြန်လမ်းအသစ်များသိမှရသောလူ။ ဤစာရင်းထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အစုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ်ချတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံးကမ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကမ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကမ်းလှမ်းလူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့အတူတကယ့်ပြောဆိုမယ့်အစားအစဉ်အလာအစာ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အကောင်းနှင့်အမြန်လမ်းအသစ်များသိမှရသောလူ။ ဖုယနေ့အသက်ရှင်သည်ချိန်းတွေ့တစ်ဦးတစ်ဝဘ်ဆိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်သောချက်တင်နှင့်အတူအခြားသူများအသုံးပြုပြီးကမ်ပဳႏုိင္ပါပရိုဖိုင်းနှင့်ပေးပို့မှာအစဉ်အလာလမ်း။
ငါလိုမတော်တဆတွေ့တဲ့ကောင်လေးသည်၊ဒါပေမယ့်မနှင့်အတူမေတ္တာ၌သူ၏စာအုပ်စတိုင်။ သငျသညျမဆိုရှိပါကကောင်းသောအကြံပြုချက်များ၊ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြု။ ဒါဟာကောင်းတဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်စေနိုင်လျှင်အကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲအပေါ်သူ့ကိုနှင့်အတူလူ၊သို့မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသူ့ကိုထင်တယ်။ ကျွန်တော်သိသည်၊ယေဘုယျအားဖြင့်၊ကလပ်အသင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ။ ငါလိုမတော်တဆတွေ့တဲ့ကောင်လေးသည်၊ဒါပေမယ့်မတူမေတ္တာ၌လဲကျသူ၏စာအုပ်စတိုင်။ သငျသညျမဆိုရှိပါကကောင်းသောအကြံပြုချက်များ၊ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြု။ ဒါဟာကောင်းတဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်စေနိုင်လျှင်အကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲအပေါ်သူ့ကိုနှင့်အတူလူ၊သို့မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဖို့သူ့ကိုတွန်း ထင်ကျွန်တော်တော်တော်လေး။ ငါအရာအားလုံးကိုသိ၊ကလပ်အသင်းနှင့်ပေါင်၊အမှန်မှာငါလည်းဒီလိုလုပ်ပြီး၊ဒါကြောင့်ငါကအကြံပြုထောက်ခံကြပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး၊ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့ကိုမေးဖို့သင်ကူညီနှင့်အတူသော့ခတ်-သူတို့ကိုပြောပြသောအကြှနျုပျ၏ပေါင်းစပ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကူညီ။ တချို့အကြောင်းပြချက်၊ကအမဖွင့်။ ငါသိကူညီပေးပါမည်။ ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်။ လျှင်သင်သာတစ်တန်းလုပ်နေအုပ်စုစီမံကိန်းကိုအလွယ်တကူပိုက်ဆံဖြစ်စေဖို့စတင်စကားပြောနေသောကြောင့်သင်စတင်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းနှင့်အသင်အလွယ်တကူလှည့်အားဖြင့်ကျောင်း၊အလုပ်၊မိသားစု၊စသည်တို့ကို။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊စိတ်မဟန်သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်။ အဘယ်သူမျှမသင်အတွက်အလျင်အမြန်။ စားရဘူးချက်ချင်းဖို့ဖိအားပေးခံရတဲ့လူ။ ကောင်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်ကျော်နှင့်အစဉ်အမြဲသိတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲအနာရောဂါစွဲ။ စေခံမ-အစကောင်းမှအဖြေ၊ငါမူကားအပြစ်တင်ဖို့သင့်ရဲ့ကျားမ:အမျိုးသမီးအများစုမသိရပါဘူးသို့မဟုတ်တန်ဖိုးအကုန္လံုးကလူကိုချဉ်းကပ်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ သူအမျိုးသမီး ဖန်တီးအတားအဆီးဖြစ်စေကြောင်းအရာကိုအမ်ိဳးပတ်ပတ်လည်လှည့်သည့်အခါသူတို့ဆိုလိုတာက(ကမေတ္တာလမ်းအပေါ်။)၊ ဒီတော့ကြိုးစားဖို့ပိုပြီးအရှက်။ ကတည်းကသင်ဆဲကျောင်းမှာ၊ယောက်ျားလေးများလုပ်ငန်းစဉ်ကို၌ရှိကြ၏၊ဒါကြောင့်အဆုံးအမမှအကျိုးအကြုံအခြေအနေ(မအကို)၊သင်အမှန်တကယ်ရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်အာရုံကြော၊နှင့်မျက်နှာကိုနောက်တဖန်အ၊သင်ပင်မကြိုးစားဘူးအဖုံးကွယ်။ ချစ်စရာ။ နှင့်မမေ့မလြော့ပါအခြေခံလိုရယ်မော၊ပြက်မဟုတ်ကြောင်းရယ်စရာ၊ပုတ်သင်၏ပခုံးတဲ့အခါနောက်ဆိုစေနိုငျသောအမှုလွဲ၊စသည်တို့ကို။စတင်အပြုံးနှင့်အတူ၊အဆက်အသွယ်၏မျက်စိများအတွက်စက္ကန့်၊ပတ်ပတ်လည်လှည့်ပြီးပြုံးလိုက်၏။ တစ်ဦးလျှင်လူသည်အမတ်၊သူကသိမည်မဟုတ်အဘယ်သို့ပြုရမည်၊အဘယ်ကြောင့်မစတင်အားဖြင့်ပြုံးသည်သူ့ကိုမြင်လျှင်သူသည်ပြုံးပြန်။ သို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်၊ကိုယ့်ပြောဖို့သူ့ကိုအတန်းထဲတွင်။ နှောင့်ယှက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ် အချုပ်၊သို့မဟုတ်ထိမ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၏အသေးအဖွဲအယှက်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ထိမ်ချန်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၏အသေးအဖွဲအယှက်သို့မဟုတ်အချုပ်၊သို့မဟုတ်ထိမ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊
အခန်းအခမဲ့ရှေ့နေ ဒေသခံများခေါ်နိုင်ပါတယ်အားဖြင့်ဖုန်း"ပူပြင်းတဲ့ဥပဒေရေးရာအကူအညီ"သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ဖို့လျှောက်လွှာအပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေကြားဖို့အရာရောက်လိမ့်မည်တွင်းငါးမိနစ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ငန်းနှင့်အတူဥပဒေအဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ဒါမှမဟုတ်ရှုပ်ထွေးများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်၊အသေးစိတ်တုန့်ပြန်အထူးကုႏုိင္ပါသည္နာရီအတွင်း။ အားလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်၏အခြေအနေများကိစ္စတွင်-ထိခိုက်မခံတဲ့၊နှင့်ဖုန်းနံပါတ်အဘို့အခွင့်ပြုထား၊ပါးစပ်ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ထံမှရယူသောလိုင်းအနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ။
အခါထောင်မှီခိုဒါအကြီးအကျယ်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အချစ်၊နိုင်ရတစ်ဦးရွက်ပေါက်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပွမပါဘဲ။ နှစ်ဦးအသံုးျပဳသူမ်ားဖုန္းမ်ား(ဟုတ်ကဲ့၊သူမနှင့်အတူ အဘယ်သူမျှမလူမှုမီဒီယာ)နှင့်နှစ်ဦးကိဳဆင္းကတ္မ်ား၊အသီးအသီးနှင့်အတူ$ကန့်သတ်။ တစ်ဦးကိုတလအတွက်၊အားလုံး ဆက်သွယ်ရေးခဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေတဆင့်အသံုးျပဳသူမ်ားဖုန်း၊ဖြစ်ပြီးဒီအမှတ်ထူးချွန်၏အဆင္းကဒ်ကန့်သတ်။ ဆိုလိုတဲ့တ်တိုေ(အရာကုန်ကျစရိတ်ငါးဆင့်တစ်ခုချင်းစီ)နှင့်အမှတ်(ပေးပို့ခြင်းကနေတဆင့်သူတို့ကိုဆ့ခ္်ကုန်ကျစရိတ်များအကြားနှင့်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ပုံရိပ်အရွယ်အစား)။ တစ်ခုသာတနေ့သို့မှတ်ချက်၊ကျနော်တို့သို့ပွေးလေ၏လိမ့်မည်။ ငါတယ် စာသားမက်မှဂျော့ခ်ျငါ့ ၊ငါ့ကိုပြောပြကြောင်းဖုန္းအလုပ်လုပ်ကိုင်မခံခဲ့ရ။ ငါသည်အလျင်အမြန်ဟုတ္ရပြန်:"ကောင်းပြီကျွန်တော်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း၊ရပ်တန့်ပြောဖို့ဒီအပေါ်ငါ့ကိုဖုန်း၊လိမ်လည်"။ ငါသည်အစီစဉ်များအတွက်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်စေလွှတ်ပြီးခဲ့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါလိရောက်ခြင်းအားဖြင့်ချင်းအနက်ဖြန်နေ့၌။ အဖြစ်ညနေရောက်သွားလျှင်ကျွန်မအံ့ဩခြင်းဖုန်းကိုခဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာအပ်။ ငါတိုက်မှသွေးဆောင်မှုကိုစာသားအပေါ်သူ့စမတ်ဖုန်းနှင့်၊အဲဒီအစား၊သူ့ကိုစေလွှတ်စာတိုေကနေတဆင့်အသံုးျပဳသူမ်ားလျှင်စစျဆေးဖို့ချင်ပါတယ်အကို။ ငါခံစားခဲ့ရသန်-ငါ့စမတ္ဖုန္းရည်ရွယ်ခဲ့ဖို့အသုံးပြုလာဆောင်မှာအဖြေနီးပါးချက်ချင်း။ ဤအမှု၌၊ငါရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒါပေမယ့်ထိုင်ပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဂျော့ခ်ျမှစာသားက ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ သူကငါးနာရီကြာ။ ထွက်လှည့်၊သူကသွင်းခဲ့ပြီးလမ်းမှားရှိသည်မ။ ထိုအချိန်၊ငါဖို့ကြိုးစားခဲ့အာရုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှအဘယ်သို့အံ့သြအကိုင်-တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မသွားလည်တော့မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ-ဒါပေမယ့်ငါ၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျော၊စောင့်ဆိုင်းနေအနားပန္းအနေဖြင့်ဖုန်းအကြှနျုပျကိုပြောပြရန်အကြောင်းအမည္လာသာ။ ဂျော့ခ်ျခဲ့နည်းပါးလာပြဿနာတွေထက်ငါအလုပ်အကူးအပြောင်းမှပြန်မ-မတ်ဖုန်း။ သူအများကြီးစာရေးဆရာ၊နှင့်နှစ်သက်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုရင်ဆိုင်။ "စာသားများနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်ပြောပြရန်ခက်သောခံစားမှုသူတို့ကိုနောက်ကွယ်က၊"ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါကျွန်တော့်အတွက်၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ဆက်သွယ်ရေး၏။ ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟောင်းနှင့်ရှိခြင်းကြိုက်တတ်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူအချိန်လူတစ်ဦးကြ်န္ေတာ္ျမင္ေနတယ္။ "အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ငါခံစားရအဆိုပါခြားနားချက်ပိုပြင်း။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အကန့်သတ်ထားအျစကားပြောဆိုချက်ကနေတဆင့်စာသားနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါရုန်းကန်မယ်လို့သူ့ကိုပြောပြဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း၊ငါသွားနှင့်ပေးထားသောအလုပ်ကစာရေးဆရာ၊သင်ပြောနိုင်ဘူးအလွန်ကောင်းသောနှင့်အတူစကားလုံး။ ခံရဖို့ရှိပါတယ်အများဆုံးအသုံးပြုဖြငါ့ဖုန္း(အခြား)၊နှင့်ကျွန်မမကြာခဏ စာလိပ်ကိုငါ့အစာကျွေးမယ့်အချိန်သွား။ များသောအားဖြင့်သောအခါ၊ငါသည်ချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦးက၊ငါအလေ့အညှာသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ထွက်ရှာဖို့ဘယ်အရာကိုမှသူတို့ရဲ့အစာကျွေးဝါသနာသူတို့ရှိသည်နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊သူတို့ရဲ့အဟောင်းရည်းစား။ အခြေခံနှင့်အတူအသံုးျပဳသူမ်ားရည်ရွယ်ဤ၏အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်သောပဲနှင့်၊တကယ်ပါပဲ၊အခါငါ့သူငယ်ချင်းတွေကမေးတယ်ဘာဂျော့ခ်ျကဲ့သို့သောကြည့်ရှု၊ငါရှိသည်တစ်ခုတည်းသော၏ဓါတ္ပံုသူ့ကိုပြသရန်။ အရပ်ရှည်ရှည်၊။ တစ်ဦး။။။တ္ေ? အားနည်းချက်များ၊ငါလေ့လာသင်ယူအချို့သောသင်ခန်းစာတွေချိန်းတွေ့အတွက်။ ဘဲအ၏ဖိအားများတက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းချောင်းကိုဆိုက်ဘာ-ဆက္သြယ္ျ၊ငါခံစားရတယ်နိုင်အယူမှုနှေးကွေး၊နှင့်စောင့်ဆိုင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ဂျော့အကြောင်းပိုထွက်ရှာမည်သူ့ကိုလူတစ်ဦးအတွက်။ အဆိုပါအရာကပို့ကဖန်တီးမိစ္ဆာသဘောမျိုးရင်းနှီး-မတွေ့ဆုံကြလူတစ်ဦးအလက်တဆုပ်စာထက်ပိုအကြိမ်၊ဒါပေမယ့်စမတ္ဖုန္းမ်ား(အရာခွင့်ပြုဖို့အဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေဖို့၊အစဉ်စောင့်ရှောက်သောအရာကိုအပေါ် အခြားလူတစ်ဦးလုပ်နေတာ)သင်ခံစားရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနီးကပ်မြင်။ ငါသည်ကျေးဇူးကိုတန်ဖိုးထားခေါ်ပြန်ဆင်းတော့မဖြုန်းတွေအများကြီးငါ့အချိန်သီတင်းသုံးသည့်အခါသူ့နောက်ကစာသားအတွက်လာချင်၊နှင့်ချွေတာအနက်ရှိုင်းစကားပြောဆိုချက်တွေကိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ၊ကျွန်မအမွေးအပိုစစ်မှန်သောချိတ်ဆက်ဂျော့ခ်ျနှင့်အတူ၊ပင်အခါမဟုတ်အစည်းအဝေးအတွက်လူတစ်ဦး။ သူအလှည့်တွင်၊အတူတူဘဲ။ ငါပြန်ပြဿနာတွေငါကလိုအပ်မှန်မှန်ရှာကုသမှုများအတွက်၊တစ်ည၊ကျွန်မဟုတ္ရဂျော့ခ်ျသူ့ကိုပြောပြဖို့ကျွန်မလက်ခံရရှိခဲ့ငါ့အျရလဒ်များကို။ သူအံ့အားဖွငျ့အကြှနျုပျကိုမေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပုံ-အရာတစ်ခုခုပင်ငါ၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းမရှိတော့ဘူးအသက်အတွက် ။ ဂျော့ခ်ျရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုခေါ်ပြသူကဂရုစိုက်။ ငါမေ့နေတာလားခဲ့၏ထိရောက်မှုကိုထိုကဲ့သို့သောငယ်လေးတစ်မူ-အားလုံးပြီးနောက်၊ဒီရက်၊ငါသာဆိုလူမှဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်၊သို့မဟုတ်အလိုအဘယ်မှာငါ၏အမိတ်ဆွေများနှင့်အခါသူတို့အနှောင်းပိုင်းင့်နှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ဒါပေမယ့်ဒီအေတာအတြင္း-မိနစ္စကားပြောဆိုမှု-ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့စကားလက်ဆုံ၊ ရယ်တယ်သိရန်အသီးအသီးအခြားအဖို့စွမ်းရည်ကိုရိုးရှင်းစွာအကြားတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အသံကိုအိမ္ကင္ဆာခံစားခဲ့ရဝေးပိုပြီးရင်းနှီးထက်တစ်ဦးဦးကိုသတ်ကြ၏၊စာသားမက်ဆေ့။ စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်၏၊တစ်ခုပေးတယ်-တက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်အလုပ်များကာလအလုပ်မှာသူ့ကိုအဘို့၊အရာဆိုလိုကြောင်းပို့နှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်။ ငါနားလည်ကြောင်းသူအလေးပေး၊နှင့်အကြောင်းစဉ်းစားအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုပြသပေးမှုပါ။ အတွက်အခြားမည်သည့်အခြေအနေ၊ငါသည်အပိုရွှင်လန်းသောကျမ်းသို့မဟုတ်ပါဌ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်၊ဒါမှမဟုတ်လက်ဆောင်တစ်ခုဝယ်အွန်လိုင်းတင်ပို့ရှိသည်ဖို့သူ့နေအိမ်များအတွက်ချစ်စရာအံ့။ ဒါပေမယ့်သူနှင့်အတူဤအလုပ်များ၊ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းလျော့နည်း-ထက်အဆင်ပြေဖို့အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အတူဖုန္း၊ငါဖန်တီးမှုရ။ အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သောဖူးဘူး၊အစဉ်အမြဲပြုသော:တက်ပြသမှာမိမိအိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးဖြင့်နေသဖြင့်ကဒ်၊နှင့်အချို့သောအဘို့စားစရာ။ ငါခေါင်းနှစ်ကျော်၊ငါ အတွက်မိတ်ဆွေနှင့်သူမ၏ပြောသည်သောအရာကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်။ "သူသွားနေတယ်လို့ထင်နေတဲ့ ။ "ငါ ။ "သူလှည့်မှာဖွင့်တံခါးဤသည်နေ့ရက်ကာလ??ကောင်းစွာ၊ အဘယျသို့ကလူပြုသည့်အခါသူတို့အဖို့ကြိုးစားနေကြဝူးတစ်စုံတစ်ဦးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမွှေးအမူ၊"သူမကဆိုသည်အဖြစ်၊သူမက ခင္ဗ်ာ။ ဒီတော့ခဲ့ကြောင်းအတိအကျအဘယ်သို့ငါပြု၏။ ငါမူရင်းအစီအစဉ်မှစက်တွေအတွက်ချွတ်မိမိစာတိုက်ပုံး-ရာဖြစ်ထွက်လှည့်နေကြပါတယ်။ ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပြောခဲ့ကြည့်ဖို့မစ်ရှင်၊နှင့်ထိုအရပ်လက်ဆောင်အပေါ်ဂျော့ခ်ျရဲ့တံခါး။ ကံမကောင်းစွာ၊အဘယ်သူမျှမယဉ်ထွက်ပေါက်ပါ။ သူ၏မိခင်ငါ့ကိုဖမ်းမိပန္ဆဲြေပြင်ပသူတို့ရဲ့အိမ်နေစဉ်၊ငါတက်အဆုံးသတ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားသူ့အဖေကြီးဖြစ်သူလမ်းလျှောက်နေတာဗျ။ ရှည်လျားဇာတ်လမ်းအတို၊ဂျော့ခ်ျခဲ့သည်ခေါ်နဲ့ကျွန်မလက်တော့ကျွန်တော့လက်ဆောင်အတွက်လူတစ်ဦး။ ငါရှက်သွေးဖြာအနီရောင်တောက်တောက်အဖြစ်ငါ သူ့ကိုပြောကြောင်းထင်စေခြင်းငှါသူလိုအပ်တဲ့အကောက်။ သူထင်ခဲ့သည်၊တစ်အနွယ်၊သူဆက်ဆက်မပြခဲ့ပါဘူး။ နေစဉ်ကျွန်မမထောက်ခံထွန်း မှာသင့်ရဲ့နေ့စွဲရဲ့အိမ်တံခါးအပေါ်တစ်ဦးပုံမှန်အတွေ့အကြုံကကျွန်မရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအပေါ်ပြန်လည်ကျရောက်ဖို့ပဲရိုက်ပြမှချစ်ခင်စုံမက်။ ကျွန်မဟာပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုသို့စီစဉ်မှုအရာအနည်းငယ်သာသောအချစ်ထိ တစ်ဦးရွက်ပေါက်ဆက်ဆံရေး။ ထိုအခါချွတ်ပေးဆောင်သူအကြာတွင်ဟုတ္ရနှင့်ပြောသော"အထက်ချိုနှင့်နမ်း"။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၊ငါဖန်ဆင်းအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှတဆင့်ရေကူးအတန်းအစားငါယူ-။ ဂို*၊အ ဘိုးဖြစ်သူမှာသူ၏့။ ကျော်နေ့လယ်စာ၊ကျွန်တော်မေးသည်သူ့ကိုအကြှနျုပျကိုပြောပြရန်အကြောင်းကသူနဲ့သူ့ဇခဲ့ကြသည်။ "သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြပါရစေ၊အယူအနေနဲ့တစ်နှစ်လုံးရဲ့ချိန်းတွေ့မီပင်ကျင်းပခဲ့လက်၊"ဟုသူကဆိုသည်။ "ငါသူ့ကိုမြင်တစ်ကြိမ်တနင်္ဂနွေ။ ငါခေါ်သူမနှင့်သူမ၏ထွက်မေး၊ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်၊"သူကဆက်လက်။ နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဤခဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနောက်ဆုံး၊ငါ ။ "မမှာအားလုံး။ ဒါဟာစာသားအတိုင်းပြုပြင်ဖို့အနေ့နှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်၊ပြီးတော့ကျနော်တို့အတက်ချိတ်။ ဒါဟာလွယ်ကူခဲ့သည်၊"ဟုသူကဆိုသည်။ "ငါကြာအကျန်အချိန်လုပ်နေတယ်အဘယျသို့ငါခစျြတဲ့။ ငါထွက်သွားမယ်လို့၊လူ၊ငါ့ကိုယ်ပိုင်အရာ။ "ငါ့ကိုစဉ်းစားတယ်။ အချိန်မှာမခန့်စောင့်ဆိုင်းရန်အနေနဲ့တစ်နှစ်လုံးကျင်းပရန်တစ်စုံတစ်ဦး၏လက်၊။ ဂိုရဲ့စကားကိုအခုထိကိုင်ထား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှု(အရာအမှန်တကယ်ဖန်ဆင်းအသက်တာပိုမိုလွယ်ကူ) ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြွလာသောအခါအချစ်ဇာတ်လမ်းများ၊မထိခိုက်ခံရဖို့အနည်းငယ်ပိုဟောင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ယူမှတစ်စုံတစ်ဦးကသိမှရနိုင်။ အစားစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာပြင်အယောင်အလားအလာမေတ္တာကိုအကျိုးစီးပွား၊သို့မဟုတ်မူလေနရာအခါသူ၏သွားမှပြန်ကြားချက်ငါ့စာသား၊ငါအပေါ်မှာတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ငါ့ဝါသနာ၊ငါ့ကိုယ်ပိုင်အရာဖြစ်ကြောင်းအရာအတွက်။ သောအခါငါပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ငါရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုပြီးပြောဖို့သူ့ကိုဘာအကြောင်းခဲ့ပြီးပြီတက်ရန်၊နှင့်နိုင်အောင်အတူတကွသုံးစွဲအချိန်အမှန်တကယ်ရေတွက်။ အိုးလျှင်သင်အံ့သြနေတယ်၊ငါနေဆဲဖြစ်ကြောင်းရိုက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံုးျပဳသူမ်ားဖုန်းများ။။။ကောင်းစွာ၊အနည်းဆုံးမှီတိုင်အောင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိဳည့္သြင္းငွေသားမှထွက်ပြေး။ ရအဆိုပါနောက်ဆုံးရခေတ်ရေစီးနှင့်သတင်းအပေါ်ဖက်ရှင်၊စျေးဝယ်၊အလှအပ၊လူနေမှုပုံစံစတဲ့၊ဆက်ဆံရေး&လင်းနှင့်ဖိတ်ပြီးဖက်ရှင်မှဖြစ်ရပ်များ၊အထူးပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းအလွန်ကြီးစွာသောဆုကိုတက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါ။
အင်တာနက်ကိုထောက်ပံ့၊ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောဝန်ဆောင်မှုများကိုနှင့်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှပျင်းရ။ လူတိုင်းအတွက်ကနေကလေးတွေဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအားအရွယ်ရောက်-တက်မှမိန်းကလေးများအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုခုရှိဖျော်ဖြေမှုအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်အရာဆိုရီဖရက္ရွ္လုပ္ႏိုသူတို့ရဲ့စိတ်နှင့်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေ။ ကလေးတွေတွေ့စေခြင်းငှါအွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ဗီဒီယိုနှင့်မိုက်မဲသောဆိုဒ်များအကောင်းဆုံးခံစားဖို့၊သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်အင်တာနက်ထဲမှာဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အသက်လူထွက်ရှာအရာတစ်ခုခုအတွက်ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသော။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းမျက်နှာလူတစ်ဦးမှလူတစ်ဦးအလှန်ဖြစ်စေမှတဆင့်ချက်တင်၊ဗီဒီယိုစကားပြောသို့မဟုတ်ဖုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြောင့်နှင့်ပိုမိုလက်တွေ့ကျမယ့်။ သို့သော်၊ရှာဖွေတစ်ဦးကိုမှန်ကန်လူတစ်ဦးမှချက်တင်နှင့်မျှဝေနိုင်အမှုအရာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုအွန်လိုင်း။ လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်လာကြပါပြီဒါကြောင့်အများကြီးပိုဆိုးသာဤအမှုကြောင့်အလွန်အကျွံလူအစုအဝေးနှင့်အများအပြားနှာက်အတုအကောင့်အသစ်များ၏။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်ရှာကြသည်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာလူတွေကိုတွေ့ဆုံရန် အွန်လိုင်းချက်တင်အထင်ထင်၊မျှဝေသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊စတင်ပတ်သက်ပြီးတော့ချပြီးရပ်တန့်သင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ် က၊ သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်နဲ့တိုက်ရိုက်မှအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကွာအားလုံးအဓိပ္ပါယ်များ၏လူမှုကွန်ယက်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဆိုက်များအတွက်ရည်ရွယ်တည်းသာစစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှာဖွေဖို့သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအွန်လိုင်း။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အများအပြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို၊ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ပြောဆို၊ဗီဒီယိုစကားပြောနှင့်မွေ့လျော်အတူအဆောက်အဦများ၏တဦးတည်းအများဆုံးအဖိုးတန်ဆက်ဆံရေး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့ဤဆိုဒ်များပေါ်မှာ။ မတူဘဲလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများ၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအရမ်းဖော်ရွေပွင့်လင်း။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတွန့်ဆုတ်ကရတဲ့အရုပ္ညောင်းခံရလျစ်လျူရှုရတဲ့ သို့မဟုတ်ဖမ်းမိပါမည်။ အများအပြားရှိပါတယ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထိုသူတို့အထဲမှ၊အဓိကပေးဆောင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်လိမ်လည်မှုဆိုက်များရရှိနိုင်ပါသည်။ ရဲ့လျှင်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုလိုသာအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရရှိနိုင်သည်။ ရှာဖွေကထည့်ထားနိုင်ပါတယ်သင်အန္တရာယ်မှာ။ ဒါကြောင့်၊သင်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံဆိုက်နှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သင်သာအကောင်းဆုံး&ယုံကြည်သူများအတွက်၊ငါသည်ဤစာရင်း၏ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်သုံးနိုင်သည်မဆိုင်းမတွရှာဖို့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်။ စူးစမ်းဤဆိုဒ်များ၊တစ်ခုခုကိုရှာအသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေဖြင့်အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်ရာက္ၾတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ကိုအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ကြည့်ရှု၊သူတို့၏ပရိုဖိုင်စစ်ဆေး၊သူတို့ရဲ့ဇီ၊သူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးမစဉ်းစားကြဘူးနှစ်ကြိမ်အစက်အမည္တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အဘယ်သူတူ။ သင်ချင်တယ်ရှိမရှိအရောသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်သို့မဟုတ်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းများပါစေ၊ဤအကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသွားဖို့သင့်ကိုကူညီတွေအများကြီးရတဲ့အတွက်အသိအချို့သောအံ့သြဖွယ်လူတို့။ သော်လည်းသူအသစ်ဖြစ်၏ကဒီမှာ၊သူ၏ဆောင်းပါးများကိုသားကူညီပေး၏တန်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စာဖတ်သူများမှအသက်ရှင်သောသူတို့၏အသက်တာပိုကောင်း။ ရထိတွေ့မှု၏ရှေ့မှောက်၌။ သန်းဧည့်သည်များထုတ်လုပ်ကူးသန်းစာမျက်နှာအမြင်အပေါ်။ အလည်အပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာစာမျက်နှာ။
အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများနှင့်တရုတ်အမျိုးသမီးများမှာပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာ။ အမျိုးသမီးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များအတွက်သူတို့ရဲ့လှပတဲ့စတိုင်များနှင့်အကောင်းဇာတ်ကောင်။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ဤအတူအကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီး၊ဒီမှာအနက်အကျဉ်းအရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်လှတရုတ်အမျိုးသမီး။ အများဆုံးတရုတ်မိန်းကလေးများအသံတိတ်နှင့်ဝယ်ထားသည်။ တရုတ်အမျိုးသမီးများမှာလည်းပိုပြီးအစဉ်အလာနှင့်ရှေးရိုးစွဲအမျိုးသမီးများထက်အခြားဒေသများ။ သူတို့မကြာခဏအထင်အမြင်ပေးစေသူတို့လျော့နည်းယုံကြည်၊ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်၊သူတို့အတော်လေးလွတ်လပ်။ သူတို့၏အလွန်တာဝန်ရှိရောက်နေတယ်နှင့်ကြိုးစား။ သူတို့ကအစအလွန်အရှက်နှင့်မကြာခဏပြုံးသို့မဟုတ်ရယ်မောတဲ့အခါေခါင္းစဥ္တစ္ခုဆွေးနွေးတင်ပြလျက်ရှိသည်အခါ၊သို့မဟုတ်သူတို့အရှက်သို့မဟုတ်စိတ်မသက်မသာ။ ဤအမျိုးသမီးများမှာလည်းယုံကြည်ရတဲ့နှင့်အလွန်သစ္စာမှ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်။ တရုတ်အမျိုးသမီးအလွန်အဆင်းလှသောနဲ့ သူတို့ကအရှေ့တိုင်းသူတွေ။ အများစုကအမျိုးသမီးတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောခန္ဓာကိုယ်၊ရှည်လျားဖြောင့်အနက်ရောင်ဆံပင်၊ဘဲဥပုံမျက်နှာ၊ကြီးမားတဲ့အညိုရောင်မျက်လုံးနှင့်အတူတစ်ခေါက်သို့မဟုတ်နှစ်ဆတွအဖုံးမ်ား၊အသံထွက်တံတား၏၊နှာခေါင်းနှင့်သူတို့အတော်လေးတိုတောင်းသော။ တရုတ်မင်းသမီးများမှာလည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှုနှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးမှကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများတွင်၊သူတို့နေဆဲငယ်ရွယ်ဖြစ်ကြ၏၊ပင်မှာအဆင့်မြင့်အသက်အရွယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ရှာတွေ့မှအရမ်းဘုံသူအမျိုးသမီးမှာကြည့်ရှု၊ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု။ ၡမ်ားတရုတ်အမျိုးသမီးများမွှေးသီး၊ရွှင်လန်းသောအသံမောင်းသောအမျိုးသားများအရူးက။ တောင်းလျှင်တရုတ်မိန်းကလေးတစ်အတိုးအရာအတွက်သူမ၏နားကို၊ကသူမအားနည်းအပေါ်၊စာသားအတိုင်း။ သင်သိခဲ့သောအရှေ့အဘို့အလွန်အရေးတရုတ်? သေးငယ်တဲ့အမှုအရာ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြုမူဖို့ဘယ်လိုမှာညစာစားပွဲသို့မဟုတ်နှင့်အတူ၊မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုသင်ကြိုက်သို့မဟုတ်မ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်မျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်ချင်သူထွက်ကြိုးစားဖို့တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာလမ်း။ ထိုကဲ့သို့သော အဆိုဒ်များခွင့်ပြုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အမျိုးသမီးရဲ့နှစ်သိမ့်ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအလွန်ဆီလျော်စျေးနှုန်း။ သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ အတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းကဲ့သို့မျိုးသမီးများစွာအွန်လိုင်းတတ်နိုင်သမျှအဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှ။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တရုတ်မင်းသမီး၊ထို့နောက်ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်ကြိုးစားတရုတ်နိုင်ငံဗီဒီယိုချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်အာရှချိန်းတွေ့။ ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ပိုနှစ်သက်သူအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်မျက်နှာ။ လျှင်သင်သည်ထိုသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်အမှန်တကယ်မှန်ကန်တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ပြီးတော့ကအကြံပြုလိုသွားဖို့တရုတ်စကားပြောနှင့်အတူအမျိုးသမီးရှိပါတယ်။ အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးဘဝမှာမွေးရပ်ဇာတိမြေလည်းပေးသည်တစ်ဦးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအခွင့်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သင့်။ မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်၌စိတ်ဝင်စားအစည်းအဝေးတရုတ်မင်းသမီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေ၊အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦးမှာဒေသခံဖြစ်ရပ်များ၊အဘယ်မှာရေးတရုတ်အမျိုးသမီးများမှာအများဆုံးဖွယ်ရှိတွေ့ဆုံရန်။ စစ္ေဒသမှတ်တမ်းများအဘယ်မှာရှိထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များကျင်းပကြသည်၊နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ချိန်းတွေ့ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီး၊သင်၏အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသငျသညျသူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ နားလည်သင်၏မယားကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အောက်ပါသူမနှင့်ပတ်သက်။ ကဆက်ဆံရေးကိုကြွလာသောအခါ၊အားလုံးအမျိုးသမီးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံချင်သူတစ်ဦးသည်တာဝန်နှင့်ဆန္ဒရှိမှမိမိကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံထားဖို့။ ကြောင့်အတန်းကိစ္စကိုတရုတ်အတွက်၊အများစုကိုအမျိုးသားကိုပဲလက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြောင့်သူတို့အမှန်မိသားစု။ ထိုကွောငျ့၊အမျိုးသမီးလေ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသားများပေးသူတို့ကိုစစ်မှန်သောအချစ်။ တရုတ်အမျိုးသမီးအများကြီးပိုအရေးကိစ်စများလိင်ထက်အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီး။ သူတို့အလွန်တွန့်ဆုတ်ဖို့လိင်ရှိသည်နှင့်အတူယောက်ျားသေချာမဟုတ်ခဲ့လျှင်သူသည်သင်တို့အဘို့အမှန်သည်။ တရုတ်အမျိုးသမီးသုံးအဖြစ်လိင်တစ်ဦး၏မေတ္တာနှင့်ထို့ကြောင့်သူအဖြစ်ရင်းနှီးသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအဘယ်သူကိုနှင့်အတူသူတို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ မင်္ဂလာဆောင်ဘို့အလွန်အရေးများအပြားတရုတ်မင်းသမီး။ ဥပဒေများလည်းအလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါကြောင့်အကြောင်းယုံကြည်အခါသင်လက်ထပ်ရ၊သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတမိသားစုလုံး၊တစ်နိုင်ငံလုံးအ။ သာတဲ့လူ။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါကြောင့်လည်းအလေ့အကျင့်အဘို့အအမျိုးသမီးနှင့်အတူအသက်ရှင်တဲ့လူရဲ့မိသားစုထောင်ပြုခြင်းပြီးနောက်။ တရုတ်မင်းသမီးယူမင်္ဂလာလွန်အလေးအနက်၊နှင့်ကွာရှင်းများသောအားဖြင့်အရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်နေဆဲဟုယုံကြည်ကွာရှင်းခြင်းကအရှက်ကွဲ၊နှင့်ဒုတိယအိမ်ထောင်တစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါရှုပ်ထွေး။ ပေမယ့်တရုတ်နိုင်ငံအပိုချမှတ်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊ရိုးရာမိသားစုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နေဆဲမြင့်မားတန်ဖိုးနှင့်ဥရောပတိုက်တစ်ဦးထင်ရှားသောအရပ်၌တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု။ တရုတ်မိသားစုအလေးပေးမေတ္တာနှင့်မြင့်မားသောကိုယ်ကျင့်တရားတို့တွင်မိသားစုဝင်။ အစဉ်အလာ၊အမျိုးသမီးသင့်မှာနေဖို့အိမ်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ၊အိမ်ကလေးများနှင့်မိသားစု၏ကျန်။ များစွာသောခေတ်သစ်တရုတ်အမျိုးသမီးများကိုင်၊ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲအဓိကမှာ။ ပညာရေးကိုအလွန်တန်ဖိုးထား၊တရုတ်အတွက်နှင့်နိုင်ငံ၏အမြင့်မားဆုံးတတ်ေြမာက်မှုနှုန်း။ အချို့သောလူများကအလွန်အမင်းကိုလေးစားအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဲထိုကဲ့သို့သောအရေးစည်းကမ်းအဖြစ်သိပ္ပံနှင့်ဆေးပညာ။ တရုတ္ အမျိုးသမီးများကိုခက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိပြီးပိုက်ဆံမကယ်တင်။ သူတို့ကိုစိုးရိမ်လေ့အကြောင်းနက်ဖြန်၊နေ့။ သူတို့ကလည်းယှဉ်ပြိုင်မှာတူညီသောအဆင့်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားစုတွင်၎င်းတို့၏လာမည့်အကိုင်များ။ အများစုမှာဒေသခံဘာသာတရားမှာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပေါင်းစည်း။ ဒါဟာဝိညာဉ်ဖြစ်၏တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြေခံလူ့အပြုအမူ။ ခေတ်သစ်ဘာသာတရားတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပါဝင်သည်မှာဗုဒ္ဓလူကြိုက်အများဆုံးဘာသာတရားကို၊အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်။ လက်တွေ့လည်းမရှိကြားခြားနားချက်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရား။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အရေးရဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဘာသာ၊သာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသင်ယူချင်အလေးအနက်၊ဒီအလေ့အကျင့်သင်ယုံကြည်။ အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုပျော်စရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ရှိခြင်း? ပြုတရုတ်အမျိုးသမီးကဲ့သို့သွားများတွင်ပါဝင်အုိေက? တရုတ်အလွန်ကြိုက်သီချင်းဆိုခြင်း၊ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအလွန်ကောင်းလှ၏။ ဝတ်ဆင်ရလ့လာအရှေ့တရုတ်ဟင်းလျာ။ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်လေ့လွန်၍၊လူတိုင်းအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူတရုတ်ဟင်းလျာနှင့်မည်သို့သုံးစွဲဖို့အထားပါ။ သင်တစ်ဦးယူသောအခါတရုတ်အမျိုးသမီး အပေါ်စားသောက်ဆိုင်၊သေချာအောင်သင်အလေ့အကျင့်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတရုတ်ဟင်းလျာ၊မိန်းကလေးများသည်အစူပါသဘောအခါသင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲကိုသိထားပါ။ စောင့်သောတရုတ်အမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားသည်အစဉ်အမြဲတစ်ခုခုစီစဉ်ထားကြောင်းသင်၏နှစ်ဦးတို့ပြုနိုင်သည်။ အခါအမျိုးသမီးဘယ်သူအကျိုးစီးပွားသင်အမြဲမြင်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်၊သင်ရှာဖွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်။ သင်တွေ့ဆုံရန်သငျသညျနီးစပ်သူကလူ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ။ အဆိုပါစွမ်းရည်ကိုမှလိုက်လျောညီထွေမှအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အလွန်အရေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလုပ်တဲ့ကတိကဝတ်ကို။ ယဉ်ကျေးစွာဖြစ်နှင့်ဖော်ရွေအသင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်သူမ၏ပြသသင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့အကြောင်း။။။။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သည်ဟုမထင်ကြဘူးလို့သင့်ရဲ့အာရှယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆင်တူသည်အားလုံးအခြားအာရှ။ ရှိပါတယ်လျှင်ရှုထောင့်များ၏အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုသင်အတူအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်၊သူ့ကိုမေးသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုသိ။ ဒီနေရာတွင်များမှာ၊ယခုသင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အကျွမ်းနှင့်အတူဒီနေ့ရဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီး၊သင်စိတ်ချလက်ချစတင်သင့်အောင်မြင်ရှာ။
မိသားစုရှေ့နေ ဒီတော့လျှင်သင်သာတစ်ဦးခက်ခဲတဲ့ဘဝအခြေအနှင့်ဆက်စပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်တို့၏သို့မဟုတ်အခြားမိသားစုအငြင်းယခုကျွမ်းကျင်တရားဝင်အထောက်အပံ့။ သင်မေးမြန်းဖို့ရှေ့နေမည်သည့်ရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။၊သင်၌စိတ်ဝင်စားကြမိသားစုပြဿနာများ၊နှင့်လည်းမှန်ကိုရွေးချယ်သူတစ်ဦးရှေ့နေလိမ့်မည်မဟုတ်သာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တရားရုံး၊ဒါပေမယ့်လည်းအကူအညီစေဖို့ဆိုကြသည်၊စုသိမ်းအားလုံးလိုအပ်သောတရားရုံး၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရွေးမှန်ကန်သောသင်တန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အဖြေခက်မိသားစုပြဿနာများ၊မဖြစ်ရန်အကြေးပိုမိုဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကွာရှင်းထားသို့မဟုတ်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်နှောင့်ယှက်၏၊အိမ်ထောင်ဖက်သင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေအပေါ်အလုပ်လုပ်နေမိသားစုဥပဒေကိစ္စရပ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရနိုင်ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်တွင်မည်သည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သောမိသားစုကိစ္စများ၊ဖတ်ရှုဖို့စိတ်ဝင်စားစရာစာရေးဆရာရဲ့စာပေနှင့်သတင္းမ်ား၊အလွန်လျင်မြန်စွာအတွေ့အကြုံရှိသူရှေ့နေများကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်။ ဤအခြေအစဉ်အမြဲလိုအပ်သမအကူအညီ။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဆိုပါထောက်ခံမှုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေလိမ့်မည်သူကိုကူညီကာကွယ်ခွင့်အတွက်အများ၏မိသားစုအငြင်းပွားမှုများ။
တရုတ္ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ကုမ္ပဏီကကောက်ခံအားလုံးလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုထဲမှာစကားပြောဆိုချက်။ အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်၊လူတိုင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဗီဒီယိုစကားပြောကြောင်းပိုမိုသင်တို့အဘို့အသင့်လျော်။ ဒီနေရာမှာငါတို့သည်အချို့သောအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အစားထိုးလို ၊ဗီဒီယို၊ချိန်းတွေ့နှင့်ချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံသောပျော်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ လူသန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုကြကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှကနေဒါ၊မက္ကဆီကို၊ဂျာမနီ၊ရုရှား၊ယူကရိန်း၊ပြင်သစ်၊အာဂ်င္တီးနား၊စပိန္၊အီတလီနိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများအဖို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ တရုတ္ဗီဒီချိန်းတွေ့သည်အထူးဆိုဒ်အကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်ဝင်ရောက်ခွင့်လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ကနေကမ္ဘာအနှံ့မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ဒါ့အပြင်ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်။ ရှိမရှိသင်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ရုရှား၊ဗင်နီဇွဲလား၊တရုတ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယ၊ဒီနေရာမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဒေသခံတစ်ဦးစကားပြောသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သင့်ဘာသာစကား။
အွန်လိုင်းကမ္ဘာနိုင်ကြမ်းတမ်းသောမိန်းမတို့အဘို့၊ဒါပေမယ့်ရေကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဒါဟာရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားများ၏ခြိမ်းခြောက်။ သို့သော်၊အဖြစ်ကမ္ဘာ့အပိုရွေ့လျားအပေါ်သို့အင်တာနက်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရှည်လျားပြီးစံနှုန်းအသစ်။ ရွိချိန်းတွေ့ဆိုက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါ။ ခပ်သိမ်းသောအမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရန်လိုလားသည့်အခါထိုသို့ရှာဖွေတာမှကြွလာအကိုက်။ အချို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ပျော်စရာအချိန်၊တချို့အဘို့အရှာဖွေနေသူတို့နောက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ အချို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ထွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့အပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နေစဉ်၊အခြားသူများဝါဆိုး။ အချို့သောရုံသို့ပြန်ချိန်းတွေ့ဂိမ်း။ ခြင်းရှိမရှိသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အမြန်ပျော်သို့မဟုတ်ဘေးကြီးသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို၊ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိသင်အောင်မြင်မှုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိန်းတွေ့။ သွားရ၊မီး။ တိုင်းထုတ်ကုန်ဒီနေရာမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ထားခြင်းအားဖြင့်စမတ်ခ်။ လျှင်သင်တို့အရာတစ်ခုခုဝယ်အထူး၊ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတစ်ဦးတွဲဖက်ကော်မရှင်သောကူညီထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်။
ပြောဆိုရန်နစ်၊သင်တွေ့ဆုံရန်မှလူသစ်တစ်ပူနွေးသောတိုင်းပြည်၊ဘယ်အဖြစ်အစေခံလိမ့်မည်ခြေအဘို့အသာယာသောအစည္းေဖၚျ။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်တယ်ပြောဖို့အတွက်တူနီးရွား၊ရွေးသောနိုင်ငံစာရင်းထဲကနေ။ ဤအဖြစ်အသုံးပြုသူများမှ။ ပါကဗီဒီယိုစကားပြောမရနိုင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေ၊ထို့နောက်သင်သည်ရှိသည်လိမ့်မယ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့နိုင်ငံခြားကနေအခြားနိုင်ငံများ။ သင်မြင်သောနိုင်ငံစာမျက်နှာနေအတွက် ။ ချက်တင်ကနေလူတို့နှင့်အတူနစ်စ်၊၊ဝေါ်လ်၊ဟေ့၊၊၊၊ ချဲ့ထွင်ရန်မိမိတို့၏အသိပညာ၏ပြည်နယ်။ ဤသည်စိုက်ပျိုး-စက်မှုနိုင်ငံ။ စီးပွားရေးအပေါ်အခြေခံသည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ချည်မျှင်နှင့်သံလွင်။ လူဦးရေ၏နိုင်ငံအရပ်၊အဘယ်သူတက်စေ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း ။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများမှာအာရဗစ္၊အ ၊ပြင်သစ်၊အချို့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောနှင့်ရုရှား။ သာတူနီးရွား ရှိပါတယ်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးအနီးကပ်အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း၊ပူနွေးသောလေထု၏။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်အစည်းအဝေးနှင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်။ နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအရောက်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်လူငယ်များကိုလည်းရှိပါတယ်၊သက်ကြီးရွယ်အိုလူ။ အင်တာနက်ပေးသည်လူတိုင်းအခွင့်အလမ်းအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နည်းလမ်းအသစ်နှင့်အစဉ်တွေ့လက်တွေ့ကျကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ထူးခြားဆန်းပြား။ ရွားေ အဖွဲ့ကမင်္ဂလာမှကြိုဆိုပါတယ်သင်နှင့်သင်ဆန္ဒရှိသာယာသောအချိန်။
တရုတ်စကားပြောရှာဖွေနေသည်လျောက်ပတ်နှင့်ဖော်ရွေသောတရုတ်၊ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံ။ ဒါကြောင့်သင်သည်လက်ျာအရပ်ဌာန၌ဖွင့်။ မှတ်တမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖို့ ကြွေချက်တင်။ ဒါကြောင့်အားလုံးအကြောင်းပြောနေတာ၊သူငယ်ချင်းများ၊နှင့်အပန်းဖြေ။ ရှိသည်သောသူလူတို့နေရာအရပ်၊ဘယ်မှာသင်အဆုံးသတ်ရန်သင်၏မကျေနပ်မှုနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ အဆိုပါစကားလုံး"စကားပြော"အများအပြားရှိပါတယ်ဇစ်မြစ်အတွက်ခေတ်သစ်အဓိပ္ပါယ်။ သငျသညျရနိုငျအကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုမှုနှင့်နားလည်မှုဆက်သွယ်ပြောဆို၊အမြင့်ဆုံးပျော်ရွှင်စရာတွေအသုံးပြုသူများအတွက်။ နောက်ပိုင်းမှာ၊အခါကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အစီ ။၊ လူအဖို့အသုံးပြုတယ်စကားပြောပြီးစာသားအတိုင်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်ကျင်။ လိုအပ်ကြောင်းလူအများအပြားမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့။ ဒီအလုပ်ရှိပါတယ်ဆက်ပြောသည်တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုရှုထောငျ့မှချက်တင်၊လူတွေဘယ်သူပိုင်ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊အထူးသဖြင့်အကြောင့်၊သူတို့ကအလွယ်တကူနဲ့အလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေတဆင့်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ရဲ့အခမဲ့နှင့်ကျွန်တော်မအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံ။ ကျွန်တော်ပေးတဲ့နေရာချိတ်ဆက်နိုင်မည့်လူသစ်နှင့်အတူရုံတင်မကဘူး၊တစ်စည်းချက်လူများအတွက်အတွက်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊နေရာတစ်နေရာအတွက်လူတိုင်းသည်၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာ။ သင်ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း စကားပြောမပါဘဲ။ နိမိတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးပါတယ်၊သို့သော်အဘယ်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခွင့်မပေးဖို့မည်သူမဆိုအတူလက္တဲြျပီးပယ္ဖ်က္ၾကပါ။ ဒါကြောင့်ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းမှပျော်စရာရှိသည်နှင့်သင်အနားယူနှင့်အတူချက်တင်အခန်းပေါင်း၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေရန်နားထောင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောဂီတ၊ဤသည်အခြားအင်္ဂါများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းဆိုက်။
ချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူဘျလူတိုင်းအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခမဲ့။ ခံစားတိုက်ရိုက်စကားပြောမှာချက်တင်အခမဲ့အဘို့အဘယ်မှာရှိဧည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်လာကြပြီကတည်းက။ ချက်တင်အခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာသည်အပြောနှင့်ချက်တင်အွန်လိုင်းအခမဲ့။ အကြီးဆုံးနှင့် အွန်လိုင်းအသိုင်းကတည်းက။ ကမ်ချက်တင်အတွက်အခမဲ့များအပြားများထဲမှတစ်ခု ဗီဒီယိုအခန်းပေါင်း။ အမွတ္ဝဘ်ဖစ္သျလိုအပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ပေမယ့်လိုအပ်နေသည်။ ချက်တင်အခမဲ့ကမ်ချတ်ပတ်ပတ်လည်ခဲ့ပြီအချိန်အကြာကြီးကတည်းက၊တကယ်တော့။ အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီတစ်အရေအဆင့်မြင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေတွေ့မြင်စိမ်း။ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမျိုးစုံဖုအခန်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောပေါင်းစည်းမှု၏လူမှုရေးပရိုဖိုင်းခွင့်ပြု အလှန်ဆက်သွယ်နှင့်ရှယ်ယာဓာတ်ပုံတွေ။ အေျပာအပေါ်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊စားပွဲတင်လွယ်ကူအောင်စကားပြောအခမဲ့များအတွက်ကောင်းစွာကြိုတင်၏။ အကြောင်းရင်းကကျနော်တို့နေဆဲခိုင်မာသွားပြီးပိုထက်အနှစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအချစ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါနှင့်ကျွန်တော်ချစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအဘို့နှင့်အတူကပ်။
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဗီဒီယိုအစည်းအဝေးဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်လူတွေအတွက်တရုတ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ကမ်။ ဒီပေါ့ပေါ့ကမ်ဗီဒီယိုစကားပြောတစ်ဦး၏ဦးဆောင်ကဲ့သို့ဆိုက်များကို နှင့်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်၏အောင်မြင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ငါတို့သည်ပူဇော်အနေနဲ့လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုတည်းဖြတ်ဗီဒီယိုချက်တင်ပလက်ဖောင်းဒါကြောင့်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတရုတ်လွယ်တကူဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ ဆိုက်ရှိတရုတ်အသေးစားနှင့်အသုံးပြုသူအများအလတ်ကမ်ဗီဒီယိုချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်ကြောင့်လူတွေ့ဆုံရန်ရှိသမျှကျော်ကနေ။
ရှာဖွေနေအဘို့အဆင်းလှသောအာရှမိန်းကလေးတစ်ဦး၊သို့မဟုတ်အဆင်းလှသောဆင်းအာရှမိတ်ဆွေ။ အားလုံးဤကြီးစွာသောချိန်းတွေ့ပ်များနှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်ရှယဉ်ကျေးမှုနှင့်အာရှအသုံးပြုသူများအောင်၊သူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုမည်သူမဆိုချစ်သောသူ။ ဤသူထုတ်ပြန်ချက်များအားသင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေတဲ့အဖော်နှင့်အတူတရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ဒါမှမဟုတ်ထိုင်းအရိုး။ အခြားအာရှနိုင်ငံများကိုလည်းကောင်းစွာကိုယ်စားပြု။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေရာအာရှနိုင်ငံအများစု၊ဤအေးမြချိန်းတွေ့လီေသင်ကူညီနိုငျသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေကနေလာခဲ့ကြောင်းဒေသ။ ပေါ်မှာဖတ်ကြည့်ဖို့အရာငါးပ်များနှင့်အဖြတ်။ ကဗ်ာေတယ္။ ဒါဟာတစ်အလိုလိုတောင်းဆိုထားသည်"လက်စွဲဲေ အသိအကျွမ်း'"။ အဆိုပါအလေးပေးဒီမှာအပေါ်ဖြစ်ပါသည်ဆက်သွယ်ထားသောအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများနှင့်အတူအာရှအမျိုးသမီး။ ယောက်ျားတွေမှဥရောပတိုက်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျဖြည့်ဆည်းနိုင်တစ်ဦးချင်းစီမင်းသမီးထံမှဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်း၊တရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများ။ သင်ကြိုက်လျှင်အာရှအမျိုးသမီး၊ဤအာရှချိန်းတွေ့လျှောက်လွှာကိုသင်တို့အဘို့။ ထိုင်းချိန်းတွေ့အာရှချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းတွေ့ထိုင်းတစ်ဦးတစ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်တွေ့သောထိုင်းချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးအပေါ်ထက်ပို။ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူဒိတ်၊ဒါပေမယ့်အသစ်များကိုထိုင်းချိန်းတွေ့အများကြီးပိုနှင့်အညီ ဗားရှင်း။ တကယ်တော့၊သငျသညျယခုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း။ တစ်ဦးရှိပါတယ်အခမဲ့ဗားရှင်း"ထိုင်းအဘို့အချိန်းတွေ့အခမဲ့"၊အဖြစ်တစ်ဦးပရီမီယံဗားရှင်းဟုခေါ်"ထိုင်းချိန်းတွေ့"။ အပေးဆောင်အက္ပ္ကိုဖယ်ရှားထားပြီးအချို့အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အခမဲ့ဗားရှင်း။ တိ တစ်အာရှအက္ပ္ကိုေ ချိန်းတွေ့အက်ပ်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်။ အက္ပ္ရှိပါတယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးအသံုးျပဳသူမ်ားပရိုဖိုင်း။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့ရှာဖွေပရိုဖိုင်းအတွက်ဂျပန်၊ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်၊ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ထိုင်း။ အရှာဒီမှာတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊လွယ်ကူစေသည်သောထွက်ပေါင်းပင်ဖို့ကြပါဘူးသူကလူများအကျိုးစီးပွား။ တင်ပြအပေါ်လက်ရှိ ။။။။။ ဆောင်းပါးအကြောင်းချိန်းတွေ့လီေ၊ အပြည့်ကော်ဖီ၏စိတ်ဝင်စားစရာမှာကြည့်ချိန်းတွေ့။ တူများစွာသောအခြားအပေါ်ဒီစာရင်း၊သင့်ရဲ့အလားအလာဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ ။ နေ့တိုင်းမှာလည်၊အလားအလာပေါင်းစပ်။ သင်ရှိသည်ဖို့နာရီပြပွဲစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အစည်းအဝေးအစီအစဉ်။ အဆိုအရလအပတ်စဉ်၊ ရဲ့ကော်ဖီညျ့အသုံးပြုသူများအဖို့လေ့အဖြစ်၊အဖြူအာရှ၊ဂျူးများ၊နှင့်ပညာတတ်၊သာများ၏ရာခိုင်နှုန်း၊ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအသုံးပြုသူများမဖြူ၊ဂျူး၊ဒါမှမဟုတ်အာရှ။ လျှင်ဤသည်လူဦးရေသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း၊ထို့နောက်ဤအက္ပ္ကိုသင်တို့အဘို့၊ ကံအကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်။ အာရှနေ့စွဲတစ်ဦးချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုခွင့်ပြုသောအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်မှတရုတ်နိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဗီယက်နမ်နှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများ။ ဖြစ်စေမိသားစုအတွက်ဆက်သွယ်မှုများအာရှ၊သို့မဟုတ်ကိုယ့်ပရိတ်သတ်၏အာရှယဉ်ကျေးမှု၊ဒီချိန်းတွေ့ႏိုသင်ကူညီနှင့်အတူချိတ်ဆက်သောအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ အာရှနေ့စွဲကုမ္ပဏီကိုတွေ့သော၎င်း၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့သည်းမခံလိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အစိတ်အပိုင်း၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ။ သူတို့အနေနဲ့ဆန့်ကျင်-နှောက်ယှက်သည့်မူဝါဒနှင့်အသုံးပြုသူများအလွယ်တကူအစီရင်ခံ။ ဤအသုံးပြုသူအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်၏ငြိမ်။ ရှာဖွေရေးအတွက်အချစ်၊မရှာ၏ရင့်ကျက်။ သင်သည်လည်းသင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များများအတွက်အဟောင်းတွေလူမျိုး။ သင်ယူချင်သည့်အာရှဘာသာစကား၊ဒါကြောင့်သင်စကားပြောနိုင်သည်သင့်ရဲ့အသစ်လေး။ ဒီကိုကြည့်ယူသောအတွက်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်း။
အွန်လိုင်းရှေ့နေအကြံဉာဏ် သင်တန်း၏မဟုတ်၊အားလုံးကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်နိုင်မှတဆင့်အွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ။ အလွန်မကြာခဏပေးနိုင်ရန်အတွက်စေ့စပ်နှင့်မှန်ကန်သောအဖြေကိုရှေ့နေလိုအပ်သည်လေ့လာရန်စာရွက်စာတမ်းများ၏အမှု၊နှင့်တောင်းနှင့်များစွာသောပိုပြီးမေးခွန်းတွေက။ ထို့ကြောင့်၊အပေါ်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူရှေ့နေတစ်ဦးနားလည်ရန်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်ဘယ်မှာသွားကြဖို့။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အရည်အသွေးဤဝန်ဆောင်မှုသာအာမခံအိမ်ရှေ့နေများအတွက်စေ့စပ်လိုင်စင်ရ။ အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်သည်ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကအသင်းအဖွဲ့"ဥပဒေအကာအကွယ်"။
အဖြစ်တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြံပေးအလုပ်လုပ်သောသူနှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးဆက်ဆံရေးအတွက်အကျပ်အတည်း၊ငါသည်ငါ့ဖောက်သည်အကူအညီလမ်းညွှန်အားဖြင့်အပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရပ်စဲ၏။ ပေမယ့်အများအပြားအခြေအနေရှုပ်ထွေးသောရှိပါတယ်၊တစ်ဦးလေးနက်တဲ့အမှန်တရားအကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်အခါတိုင်း။ က အဲဒီအမျိုးသမီးတွေဟာယောက်ျားစွန့်ခွာသင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌။ သင်ကခံစားရပါလိမ့်မယ်၊ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ ဒါဟာနှလုံးနှင့်အမျက်ထွက်။ သင်မူကားထိုသို့ပြု။ ယူအားလုံးသည်သင့်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိနှင့်အာဏာရှိသည်သွား။ အမျိုးသမီးချန်အမျိုးသား၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသူတို့သားသမီး၊အိမ်များနှင့်ဘုံဘဝ။ အမျိုးသမီးများအဘို့အသွားအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်း ခင္ဗ်ာ။ တဦးချင်အမျိုးသားများနားလည်သဘောပေါက်ဖို့သူ့ကို:သူသည်အလုပ်လုပ်၊ဂေါက်သီးကစား၊ကစား၊နာရီနဲ့တူတယ်၊သွားငါးဖမ်း။ အဆိုပါစာရင်းတွင်ရှည်လျားသည်။ ဒီလူမဆိုးဘူး။ ကောင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကကောင်းသောအဘိုး။ သင်ထောကျပံ့နိုငျ။ သူတို့ကောင်း၊ချစ်ဘွယ်။ ဒါပေမယ့်စဉ်းစားသင်၏မယားဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့။ ကြသည်မဟုတ်။ အမျိုးသမီးကိုငါ့အရုံးခန်းထဲမှာသင်ပြောပါ:"တစ်စုံတစ်ဦးကနိုင်လာပြီးကျွန်တော့်ကိုသတိမပြုမိမှာတိုက်ရိုက်အခြေရှေ့ကျွန်မခင်ပွန်း၏စာသားအတိုင်းသုတ်။ 'တခါတရံ၊ဤသဘောပေါက်စေသည်သူတို့ကိုကြောက်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အော်ဟစ်။ -ငါညာင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမှားအမှန်။ ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်၊ အဘယ်သို့ငါတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင်သည်အဖြစ်နိုင်အဖြစ်အမျက်ထွက်သို့မဟုတ်ထိခိုက်နာကျင်သို့မဟုတ်မာန်သင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း။ သင်၏မယားသည်သင့်အိမ်ခြံမြေ။ သင်ကမရောင်းသင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ သင်ဝင်ငွေ။ နေ့၊တဒင်္ဂ။ သင်အနိုင်ရအမျိုးသမီးတစ်ဦးအားဖြင့်ပဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်၊သင့်ရဲ့အသက်ရှင်လျက်။ ရမည်ဟုသင်ခံစားရပါစေ။ သင်ဟောပြောဖို့သင်တို့နှင့်အတူအကြောင်းအရာတွေကိုသင်အလုပ်များချင်မှခံစားရကြောင်းသင်နားထောင်နေတယ်။ မယဉ်ကျေးညိတ်။ မပေါ်ကျောက်ပြားကို။ ကျိန်းသေမရျနတျရဲ့ထောက်ခံကစား။ သူတို့လိုခံစားရတယ္။ သင်ချင်ကြပါဘူးဖို့ပျက်ကွက်နိစ္၊သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာ။ သင်ခံစားရချင်တယ်သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်။ သင်ခံစားရ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်အားထက်သန်။ သင်သူတို့ကိုပြ။ သင်ပိုင်ဆိုင်။ ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးပါရှိပါတယ်။ လျှင်သင်ဆုံးရှုံးပါဘူးဒါကြောင့်၊အဘယ်ကြောင့်။ သည်အဘယ်မှာရှိသူမ။ တွေ့ကထွက်ရှာတွေ့၊သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်။ အခါသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအစိတ်ဘယ်တော့မှမ၊ထို့နောက်သင်တို့သည်ပေါ်မှာချေးအချိန်။ လျှင်သင်၏အမြင်ကိုသင်နှင့်အတူ၊သင်သည်သင်၏မယားကိုလုံးဝ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်း၊ကြိုးစားနားထောင်ဖို့။။။။ လှည့်လည်၏အကြံအစည်။ သေချာအောင်။ မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအများကြီး။။။။ ကြည့်ရှုသည်နောက်တဖန်အကြည့်အရှုပိုမိုပြင်းထန်သော။ သင်၏ချက်၊ဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ထက်ထက်ပိုရှည်သည်သာယာသော။ ဆိုရင်မေးသင်ဘာလုပ်နေတော့၊ပြော:"ငါရှာနေတာပါ။ ကျွန်မမြင်ချင်သင်အတွင်းမှ။ ကျွန်တော်ကစပ်စုဖြစ်ဖို့သင်၌နေသောသူ။ အားလုံးပြီးနောက်ဤနှစ်ကိုဖြည့်ဆည်းသင်တို့အသီးအသီးများနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း။ 'ဒါပေမယ့်ပြောမှသာလျှင်ကိုဆိုလိုတယ်၊သင်သိလျှင်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုထိပုတ်ပါသင့်ရဲ့အပြည့်အဝအာရုံစိုက်။ မီသင်ထိသင်ခံစားရသောအာရုံသင်သည်သင်၏လက်၏။ အာရုံစိုက်ဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သည်ကိုအတွက်အခုအချိန်မှာအဆက်အသွယ်လုပ်။ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်။ ခင်ဗျား။ အာရုံစိုက်ဖို့အသေးဆုံးများအာရုံနဲ့ခံစားချက်။ (ဒီစရံအဖြစ်ရည်ညွှန်းတိ)နှင့်အတူ၊သင်ခံစားရသောအရာကို၊မည်သည့်အခိုက်မှာ။ ဒါပေမယ့်သင်အလုပ်များနေနေ။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ပင်ငါးခု မိနစ်။ ငါးမိနစ်နေ့တိုင်း။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဤအချိန်။ ငါအကြောင်းပြောနေတာမဟုပ်ဘူးသောညစာစားပွဲသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားည(ပေမဲ့သူတို့အားကြီးမြတ်လွန်း)။ ကျွန်မပြောနေတာကငါးမိနစ်တစ်နေ့လျှင်၊သင်အမျိုးသမီးမြှုပ်နှံသင်မျှဝေသင့်အသက်တာ။ ပွင့်လင်း အခမဲ့အမြင်နှင့်အကြား။ သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ ငါအလောင်းနှင့်အတူ:စတင်ခဲ့င့်ပြီးတာနဲ့၊သင်တို့ဆီသို့လာဦးမယ်အရသာမရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြ။ တရားမျှတမှုလွကူးေျတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြံပေးသောမှူးနှင့်အမှတ် ကုထုံးတစ်ဦးချင်းစီဆွေးနွေးတိုင်ပင်၊၊နည်းပြနှင့်အတူတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့နှင့်စုံတွဲမှသူတို့အားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်လာသောဆက်ဆံရေးအတွက်၊သို့မဟုတ်ချိုး။အစည်းအဝေးများအားဖြင့်ဖုန်း၊ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ အီးမေးလ်ကိုတောင်းလိုင်းအချက်အလက်။ ဒီပို့စ်သည်မူလက။ ဟုတ္တယ္မအငြင်းအတြက္အားလုံးရှုထောင့်။ ပရဟိတအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှနိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ ချင်၊သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှအဖွဲ့။ အဓိကအဆောင်းပါးများနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များလက်ခံရရှိရန်နေ့စဉ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ အသတင်းလွှာများပါဝင်စေခြင်းကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာ။.
အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ မရှိဘဲကြော်ငြာ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ အထီးကျန်သလိုတွေ့ဆုံရန် ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့ အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနိဒါန်း